Qhuba ngakumbi ukuKhokela ngokuKwakha iphepha leLandingi loMakhi weWordPress | Martech Zone
Ngelixa uninzi lwabathengisi lufaka nje ifom kwiphepha leWordPress, ayisiyonyani leyo ilungiselelwe kakuhle, iguqula iphepha lokufika. Ukufika kwamaphepha kuhlala kuneempawu ezininzi kunye nezibonelelo ezihambelana nazo:
Iziphazamiso ezincinci - Cinga ngamaphepha akho okufika njengokuphela kwendlela ngaphandle kweziphazamiso. Ukuhamba, iibar ezisecaleni, iinyawo, kunye nezinye izinto ezinokuphazamisa undwendwe lwakho. Umakhi wephepha lokufika wenza ukuba ubonelele ngendlela ecacileyo yokuguqula ngaphandle kokuphazamiseka.
Unxibelelaniso -Njengoko kukhokelela kuguquko kwiphepha lakho lokufika, kubalulekile ukuba ukukhokelwa kunikezelwe kumntu ofanelekileyo OKANYE kufakwe kwiphulo lokukhulisa ukuze abaqhube babe ngabathengi.
Uvavanyo lwe-A / B / x -Amaphepha okufika kufuneka abenento nganye eyahlukileyo enokuvavanywa ngokulula kwaye ilinganiswe ukunceda abathengisi ukwandisa amazinga abo okuguqula.
Imisebenzi -Ukwazi ukuguqula ifayile yakho Uhambo lomthengi ukulinganiswa amanyathelo okuthengisa ifanele kunceda ukuba uqonde indlela aziphethe ngayo umsebenzisi ukuze ukwazi ukwandisa ukubandakanyeka kwinqanaba ngalinye.
Ukuphinda kabini -Iphepha elinye lokufika alisebenzi kunye njengamaphepha amaninzi, ekujoliswe kuwo. Ukusebenza ngokukuphindaphinda kunye nokwenza ngokwezifiso iphepha ngalinye lokufika kwimarike ekujolise kuyo ofuna ukuyiguqula kuya kuqhuba uthethathethwano olongezelelekileyo… kwaye ekugqibeleni ingeniso.
Umakhi wekhasi lokuLungisa iLandingi
Umhlaba ibonelela ngazo zonke ezi zisombululo nangaphezulu. A into oyibonayo yile uyifumanayo (WYSIWYGTsala kwaye ulahle, umakhi wephepha lomhlaba ongenamakhowudi unceda ukuba ukhawuleze ukukhupha, uphinda-phinde, kwaye wenze iqela lokuqaqambisa amaphepha okufika ukusuka kwingqokelela yeetemplate ezingama-300 +… ukongela ixesha elininzi.
Iqonga likwenza ukuba wenze iimvavanyo ze-A / B ezingenamda kwaye uhambise injini yengcebiso yokwenza ukuba iphepha lakho lokufika lihambelane ngakumbi nomxholo onamandla.
Umhlaba ikwabandakanya ishedyuli yomkhankaso eyomeleleyo ukuqala kunye nokuphelisa imikhankaso yakho ngexesha ngokuzenzekelayo.
Thatha ithuba lokudityaniswa okungaphezulu kwama-40, uhlalutyo, ukulandelela, kunye nezixhobo zokujolisa ekuphuculeni ukusebenza komzamo wakho wentengiso. Ukudlula kukhokelela phantse kuyo nayiphi na intengiso ye-imeyile okanye isixhobo seCRM oyisebenzisayo, ukudibanisa nezisombululo ezinjengeMailChimp, HubSpot, SalesForce, kunye neZapier.
I-Landingi ibangele iiPopups
Ukuba ufuna ukucofa uguquko ngakumbi, ukubangela ukuvela ngokusekwe kwinjongo yokuphuma, ixesha kwindawo, okanye ubunzulu bokuskrola kunokuphucula ukubanakho kwakho ukubamba oko kukhokelayo okanye ubuncinci ufumane i-imeyile yabatyeleli ukuba ibatyhalele kwiphulo lokondla. Umhlaba ubonelela nje!
Ukungena kweplagi yeWordPress
Izisombululo zephepha lokufika zihlala zifuna ukuba uqhube ukhokele kwindawo engezantsi, kodwa Umhlaba unikezela Plugin WordPress apho unokushicilela iphepha lokufika ngqo ngaphakathi kweyakho WordPress indawo!
Qalisa ukuLinga kwakho kweLandingi yeWordPress kwiphepha eliSimahla
Ukubhengezwa: Ndililungu le Umhlaba kwaye ndisebenzisa ezo ziqhagamshelo kulo lonke eli nqaku.
tags: injongo yokuphumaPhuma ngenjongo yokungenaumakhi wephepha lokufikaiphepha lokungena kweplagiiphepha lokungena kweplagi yegamamaphephaumhlabapopups ezibangeleiphepha lokumisa iphephaiplagi yamagama